“Go’doominta Qadar waa bilowga baaba’a argagaxisada” Donald Trump | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta “Go’doominta Qadar waa bilowga baaba’a argagaxisada” Donald Trump
“Go’doominta Qadar waa bilowga baaba’a argagaxisada” Donald Trump
Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu faa’ido ka helay booqashadii uu dhowaan ku tegey dalka Boqortoyada Sacudi Carabiya taasna ay tahay in wadamada Khaliijka ay cadaadis saareen dalka Qadar kaasoo lagu eedeeyay in uu taageero argagaxisada.
Trump ayaa ku tilmaamay booqashadiisii Sacudi Carabiya mid durba guul laga gaaray ayna ka soo muuqdaan ifafaale bilow u ah soo afjarida argagaxisada.
“Safarkeygii dhowaan aan ku tegey Bariga Dhexe waxaan sheegay in aysan sii socon karin maalgelinta mabda’a asalraacnimada. Hogaamiyaasha waxa ay tilmaameen Qadar. Bal Eeg!”ayuu Mr Trump ku soo qoray bogiisa Twitter maanta.
Madaxwaynaha Maraykanka Donald Trump ayaa Wax yar kadibna soo qoray fariin kale.
‘Waa ay wanaagsan tahay in aan arko in booqashadii Sacudi Carabiya uu miro dhalayo. Waxay ii sheegeen inay tallaabo qaadi doonaan sidoo loo joojin ahaa maalgelinta argagaxisada,dhammaan waxa ay tilmaameen Qadar. Waxaa laga yaabaa in ay tan tahay bilowgii baabi’inta argagaxisada waxshiga ah!.”
Dowladda Maraykanka ayaa wadanka Qadar saldhigga waxaa ay Ku leedahay Saldhigga ugu weyn ee ciidamada Maraykanka ee Bariga Dhexe kuwaasi oo ah ciidamo gaaraya 8,000 oo askari.
Saldhiggaas ayaa ah mid ay ka duulaan diyaaradaha Maraykanka ee duqaymaha ka gaysta dalalka Yemen, Ciraaq, Suuriya, Afghanistan iyo Pakistan.
Taliyaha ciidamada cirka ee dowlada Maraykanka Heather Wilson ayaa u sheegay Senatarada dalka Maraykanka in saldhiga ay ku leeyihiin dalka Qadar uu si caadi ah u shaqeyn doono islamarkaana aan saamayn doonin cadaadis Diblumaasiyadeed ee la saaray wadanka Qadar.
Sacuudi Carabiya, Bahrayn, Yemen,Libya, Maldives iyo Masar ayaa xiriirka u jaray wadanka Qadar, hase yeeshee dowlada Qadar ayaa beenisay dhammaan eedeymaha loo soo jeediyay.
Previous articleCabdifataax Shaawey oo loo magacaabay agaasime ku xigeenka Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadaha
Next articleDowladda Soomaaliya oo ku baaqday in wadahadal diblomaasiyadeed lagu xaliyo Khilaafka Dowladdaha Carabta